गोकुलेश्वरमा मेलाको रौनक - फोटो फिचर सहित !! | सुदुरपश्चिम खबर
गोकुलेश्वरमा मेलाको रौनक – फोटो फिचर सहित !!
बैतडी र दार्चुला जिल्लाको सिमा बजार गोकुलेश्वरमा महाशिबरात्री मेला आजपनि जारी रहेको छ । कम्तीमा ५दिन सम्म लगातार चल्ने गोकुलेश्वर मेलामा डेउडाखेल, भलिवल प्रतियोगीता लगायतका कार्यक्रम गरिएकाछन् ।
हरेक बर्ष महाशिबरात्रीका दिनदेखि लाग्ने मेला भव्यताका साथ सम्पन्न्न हुने गरेको छ । महाशिबरात्री मेलालाई ब्यापारिक दृष्टीकोणको महत्वपुर्ण मानिने गरेको छ । गोकुलेश्वर मेलामा स्थानिय स्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीको व्यापार हुने गर्दछ ।
स्थानीय उत्पादनको ब्यापारका लागी गोकुलेश्वर मेला निकै प्रसिद्ध मानिन्छ । हरेकबर्ष उनबाट हतले बनाएका सामग्री बेच्न मेलामा आउने गरेको ब्यास गाउँपालिका छाङरुका स्थानियबासि कुसुम बोहराले बताउनुभयो । आफुहरुले बर्षभरी गरेको मेहेनतको फल खोज्न मेलामा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।.
गोकुलेस्वर मेलामा हस्त उत्पादित सामग्रीको कारोबार राम्रो हुने गरेको ब्यापारिहरुले बताएकाछन् । मेलामा बैतडी, दार्चुला सहित सुदुरपश्चिमका सबै जिल्लाबाट दर्शनार्थीहरु आउने गरेकाछन् ।
गोकुलेस्वर मेलामा निगालोबाट निर्माण हुने सुप्पो, डोका, छाप्रा, मोट्टा लगायतका सामग्रीको कारोवार हुने गरेको छ । यसैगरि तामा, फलाम, आल्मोनियमका भाँडाकुडाहरुको राम्रो कारोबार हुने गरेको ब्यापारिहरुले बताएकाछन् ।